Ikhamera efihliwe ye-Mini Spy Video (SPY006) | Izixazululo ze-OMG
Ikhamela ye-Mini Spy efihliwe (SPY006)
Ikhamera encane efihliwe yokuhlola iyikhamera encane kunazo zonke emhlabeni.Iyimfashini futhi iyagqokwa futhi iyafana nazo zonke izinhlobo zamathuluzi aphathekayo. Izicelo: Surfing, Hiking, Sports Bike Driving, Motorbike, Lanyard Umgexo njalonjalo.
Ukurekhoda okude kwesikhathi eside: Yakhelwe ngaphakathi 800 ma Ibhethri le-lithium, amahora angama-9 wokurekhoda aqhubekayo.
Izwi nokunyakaza kuyasebenza: Mi-otion yokurekhoda okusetshenzisiwe, ukurekhoda kwezwi noma umsindo okuqoshiwe okusebenziwe nokuqoshwa kwevidiyo ngesandla okungakuma izinsuku ze-6, ephelele njengekhamera ye-spy noma ikhamera ye-nanny. Izwi elizwakalayo lokuzwela liyasebenza, ikhamera izoqala ngokuzenzakalelayo ukurekhoda uma umsindo ozungeze ikhamera ungaphezu kwe-60 decibels (ukukhuluma ngokujwayelekile umsindo noma izinyathelo).
Ikhamera ephelele ye-HD 960P:
Ukuxazulula kwevidiyo: 1280x960P;
Ukulungiswa kwesithombe: I-1.3MP (1280 × 1024 VGA).
Isikrini sokuphuma: I-Micro USB.
Incane kakhulu ne-Lightweigh, imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi: I-PC Shell, i-LWH: 2.3 × 0.9 × 0.6 intshi; Inani: 25g; Umklamo ohlangene, i-Portable handheld DV DC, i-Anti-Shake; ukusekela ikhadi le-TF kuze kufike ku-32GB. Ukusekelwa kokurekhodwa okujikelezayo.
Ikhamera encane kunazo zonke: LWH: 2.3 × 0.9 × 0.6 intshi.
I-master chip enhle kakhulu, iletha ikhwalithi eqinile nemiphumela yokuqopha i-HD.
I-800 mA lithium ibhethri eyakhelwe ngaphakathi, i-video yokugcina yokuqopha amahora we-9.
Ukuqoshwa kwezwi okusebenzayo.
Ukulungiswa Kwevidiyo ye-HD: 1280x960P; Ukulungiswa Kwezithombe: 1.3MP (1280 × 1024 VGA)
Incane kakhulu futhi ivolumu, ngakho-ke ungakwazi ukuyifihla kalula ngaphandle kokuqaphela. Ihhovisi, ukuhamba, isitolo, ikhaya eliphephile ekusetshenzisweni okuhlukile (izingane, izilwane ezifuywayo, abantwana abasha, abantu abadala).
Ukurekhoda kwe-Loop kushintshwe ukuthi kubhale phansi ifayela elidala kunazo zonke (ifayela levidiyo elingu-10-minute).
Ukutholwa kommoya: Uma kutholakala ukuhamba, ikhamera izoqala ukurekhoda ngokuzenzakalelayo.
Amandla ahlakaniphile, aletha ukusetshenziswa kwe-ultra-low kanye nesikhathi eside sokurekhoda.
Ikhamera yeWebhu: Ukusekelwa kuphela ngaphansi kwesistimu ye-Windows8.
Ukushaja ukusekela ngenkathi ukurekhoda (kudinga ukuxhumeka ku-plug ye-USB).
Njengoba umkhiqizo uyingxenye ye-HD DV, amandla alo wamanje akhulu kunalokhu kwencazelo ejwayelekile.Kuvamile ukuthi igobolondo layo lingashisa lisetshenziswe.Angakhathazeki ngale nkinga ,. Imikhiqizo idlule ukuhlolwa okunamandla kanye nekhwalithi iphelele.
Sicela ungasebenzisi umsebenzi we-Voice & Motion ocushiwe endaweni enomsindo, Ngeke ube nomthelela.
Futhi, sikhumbuza ukuthi udinga ukuyisetha kabusha uma ingasebenzi.
Le khamela ayinayo i-WIFI, sicela ufake imemori khadi kumfundi wekhadi ukuze ubuke ividiyo
Le khamera ayifaki ikhadi le-sd, udinga ukuthenga imemori khadi ngokuhlukile
Idizayini encane kunazo zonke, ungabeka amakhamera ayimfihlo emashalofini ezincwadi, emadeskini noma kwenye indawo engabonakali ibonakala ivikela ikhaya lakho, umndeni kanye nebhizinisi lakho.
Ukusetshenziswa kokuphepha kokuhlala nebhizinisi: Ukuqapha kwezinhloli zesikhathi sangempela njenge-Nanny cam, i-pet cam ukugcina iso lengane yakho nezilwane ezifuywayo, ukuphepha ekhaya, ukuqapha ibhizinisi ngokuyimfihlo.
Amaphikseli aphumelelayo 1.3MP
Izithombe: jpg; Ifomethi yevidiyo AVI
Ukulungiswa Kwevidiyo 1280 × 960 30fps
Isistimu yokusebenza: iwindi lokusekela kuphela i-10 (inlucde) ngezansi ne-MAC
Usekela iKhadi Lehlobo TF; Usekela uMax. Amandla: I-32GB (ayifaki phakathi)
I-Interface Yokuphuma Micro USB
Ikhono langempela lebhethri: 800 mAh
Isikhathi sokushaja ibhetri: Amahora we-2-3
Ikhamela ye-Mini Spy efihliwe (SPY006) igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-5531 Ukubuka kwe-5 Namuhla